अर्थ | Jwala Sandesh | Page 13
यस्तो छ स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तालिका
सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि समयावधि तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहजताका लागि “स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४” जारी गरेको छ । उक्त दिग्दर्शनअनुसार स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार २ गते सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका एवम् बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्राप्त गर्नेछन् । असार ४ गते स्रोत अनुमान र कुल [...]
चूडामणि शर्मा पक्राउपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्र हलचल
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा पक्राउ परेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघभित्र हलचल मच्चिन थालेको छ । शर्माले कर फछ्र्यौटको नाममा राज्यकोषलाई प्रत्यक्ष घाटा पर्ने गरी दिएको करोडौंको कर धरापमा परेपछि महासंघका केही उच्च पदस्थ व्यक्तित्वदेखि सामान्य पद धारण गरेका व्यक्तिहरु समेतमा हलचल मच्चिएको महासंघ निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । शुक्रबार दिउँसो शर्मा पक्राउ परेसँगै महासंघका केही व्यवसायी [...]
वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान बजेट के-केमा खर्च गर्न पाउँछन् स्थानीय तहले ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षकोलागि संघीय बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले एक चरणमा सकिईसकेको र केही बाँकी पनि रहेको स्थानीय तहको लागि कूल २ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको महराले जानकारी दिएका छन् । बजेटले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा कूल २ खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड ८० लाख ९१ हजार [...]
माअोवादीलार्इ सफार्इको मौका ! युद्धपछि बदलिएको बजेटको यसपाली होला त ‘युटर्न’ ?
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झण्डै १२ खर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण नयाँ नीति तथा कार्यक्रम विना नै काम चलाउ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र निर्वाचनको लागि केन्द्रीत रहेर बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता कुराहरु स्पष्टसँग नै उल्लेख गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन [...]
प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८ सय ६२ डलर पुग्यो
काठमाडौं । आम नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर ८ सय ६२ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ । आज संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । एक नेपालीको बार्षिक आम्दानी १० हजार ८ सय १५ रुपैयाँले बढेको हो। यस्तो आम्दानी बार्षिक ८८ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ पुगको छ। गत वर्ष प्रतिव्यक्ति नेपाली आम्दानी ७ सय ५७ डलर रहेको थियो । त्यस्तै, चालु आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९.३७ [...]
दैलेख, वैशाख २० । चुनावका लागि दैलेखमा दलहरुले टि सर्टमा मात्र करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । दैलेख सदरमुकामस्थ्ति सेभेन स्टार फेन्सी पसलबाटमात्र करिब १५ लाख रुपैयाँ बराबरको टि सर्ट र पार्टीको झण्डा विक्रि भएको छ । काँग्रेस र एमालेको चुनाव चिन्ह अंकित टि सर्ट करिब ७ हजार थान विक्री भएको सेभेन स्टारका सञ्चालक मनोज थापाले जानकारी दिए । उनले काँग्रेस र एमाले दुबै पार्टीबाट टि सर्ट र झण्डाको बराबर माग आएको बताए । उनले चुनावलाई [...]
बाफीयामा लालमोहर लागेपछि हल्लीयो बैंकिङ क्षेत्र
आरपी पौडेल / बाफीयामा लालमोहर लागेपछि बैंकिङ क्षेत्र हल्लीएको छ । अब बाफीया संशोधन हुने आशा पूरै टरेको छ । जसकारण बैंकर्सको समय अवधि, बैंक संचालन समिति अध्यक्षको समय अवधि तथा एउटै व्यक्ति बैंक र इन्स्योरेन्सको संचालक हुन नपाउने अबस्थाले बैंकिङ क्षेत्र हल्लीएको हो । बाफीयामा आइतबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणकरण गरेपछि अब कार्यान्वयनमा आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कतीपय सिइओहरु पुराना भएका छन् । जसको २ कार्यकाल अवधि सकिन लागेको छ । त्यसैगरी [...]
स्थानीय तहको बजेट एकदेखि ७ अर्बसम्म
१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले जिल्लामा प्रदान गर्दै आएको अनुपातमै स्थानीय तहमा बजेट प्रदान गर्ने भएको छ । न्यूनतम एक अर्बदेखि अधिकतम सात अर्ब रुपियाँसम्मको बजेट एउटा स्थानीय तहमा जाने सम्भावना रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अनुमान छ । स्थानीय निकायलाई संविधानले स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरेपछि धेरै अधिकार प्रदान गरिएको र त्यसका लागि बजेट वृद्धि हुने बताइएको छ । स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा जाने बजेट न्यूनतम एक अर्ब र अधिकतम [...]
संघर्षले बाच्न सिकायो
निर्मल अधिकारी दैलेख , साविकको वेलपाटा गाविसकी लक्ष्मी वि.क.को श्रीमान गुलाफ वि.क.को अकालमै मृत्यु भएपछि उनलाई विहान वेलुका हातमुख जोर्न समेत मुश्किल भयो । भनिन्छ श्रीमान श्रीमति एक रथका दुई पाँग्रा हुन । एउटा पाँग्रा नभए रथ गुड्ना सक्दैन् । श्रीमान रुपी पाँग्रा गुमाए पछि लक्ष्मीले दैनिक घर व्यवहार चलाउन धेरै संघर्ष गरिन् । समाजमा एकल महिलाले भोग्नुपर्ने सबै कष्टहरु लक्ष्मीले भोगिन् । एकातिर आर्थिक स्थितीको अभाव अर्काेतिर सामाजिक प्रहार । रहर [...]
उद्योग वाणिज्य संघको आठौ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
समृद्ध दैलेखको मुल आधार, उद्यम कृषि पर्यटन र व्यापार भन्ने मुल नाराका साथ उद्योग वाणिज्य संघको आठौं वार्षिक साधारण सभा तथा भवन उदघाटन् कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । व्यवसायीहरुले आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्न अत्यन्त कठिन परिस्थितीको सामना गर्नुपरेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शान्ति शर्माले बताए । बन्द, हड्ताल, लोडसेटिङ्ग,न्यून भोल्टेज, घर बहाल समस्या, उद्योग वाणिज्य संघमा [...]